IssueHunt: waa madal cusub oo loogu talagalay maalgelinta ilaha furan | Laga soo bilaabo Linux
Maalmo ka hor maqaal aan ku daabacay halkan barta, Waxaan ka faallooday soo-jeedin aad u fiican waayo, kuwa raadinaya jidka awood u yeelan karto inaad lacag ku kasbato mashaariicdaada furan iyadoo la kaashanayo storj.
Storj waa xalka kaydinta gabi ahaanba baahintiisa iyo ilo furan oo ah waxay bixisaa qaab ganacsi oo la mid ah Airbnb loogu talagalay isticmaaleyaasha haysta kaydinta dheeraadka ah iyo xawaaraha ballaadhinta.
Waxaad la tashan kartaa inbadan oo faahfaahinta daabacaadan ah Xiriirka soo socda.
Maanta Waxaan soo bandhigi doonaa beddelaad kale oo aad u fiican oo aad isticmaali karto si aad dakhli uga kasbato mashaariicda isha furan ee inbadan oo idinka kamid ahi horumariyaan.
Wax yar ayaan ka hadli doonnaa IssueHunt oo ah barxad cusub kaas oo loo dalacsiinayo soo-jeedin heer sare ah si ay horumariyayaashu uga helaan adduunka oo dhan faa iidooyin ku saabsan horumarkooda.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka in badan oo horumariyayaal ah iyo shirkado furan oo furan ay la kulmaan ayaa ah maalgelinta.
Waxaa jira fikrad, xitaa rajo, bulshada dhexdeeda oo ah in Software-ka Bilaashka ah iyo Meel Furan la bixiyo iyada oo aan wax kharash ah ku bixin.
In kastoo nama waa inay noqotaa sida oo kale, codsiyo badan ayaa loo qaybiyaa bilaash, laakiin dhibaatadu waa kharashka dayactirka barnaamijyadan dabcan kuwa horumariya kuma quudiyaan fudud mahadsanid.
Taasi waa sababta qaar ka mid ah codsiyada (ay dhif u tahay Linux) badiyaa ay ku jiraan xayeysiisyada si loo helo xoogaa dakhli ah ama loo bixiyo rakibidda codsi dheeri ah.
Hab kale oo lacag looga dhigto mashaariicdan waa iyada oo lagu daro xayeysiinta boggooda internetka ama la codsado tabaruca sababta.
1 Ku saabsan IssueHunt
2 Sideed u bixisaa dakhliga ku soo gala?
Ku saabsan IssueHunt
In kasta oo, kiiskan, ay ka faa'iideysan karaan IssueHunt oo bixisa adeeg lacag siiya horumariyeyaal madaxbannaan inay gacan ka geystaan ​​furaha ilaha furan.
Wax soo saarku wuxuu yimid markii horumariyayaashii ka dambeeyay barnaamijka qadarinta ee Boostnote ay gaarsiiyeen bulshada si ay ugu darsadaan wax soo saarkooda.
Labadii sano ee ugu horreysay isticmaalka Isaaq Boostnote waxay ka heshay in ka badan 8,400 xiddig oo ka socda Github iyada oo loo marayo boqolaal tabarucayaal iyo tabarucaad aad u tiro badan.
Badeecadu aad ayey ugu guuleysatay in kooxdu go'aansatay inay u furto bulshada inteeda kale.
Maanta, liistada mashruucyadu waxay adeegsadaan adeeggan, iyagoo ku bixinaya kumanaan doolar abaalmarinno u dhexeeya.
Sideed u bixisaa dakhliga ku soo gala?
Way qabtaa iyada oo loo marayo abaalmarinta: abaalmarin lacageed oo la siiyo qof xaliya dhibaato gaar ah.
Maalgelinta abaalmarintan waxay ka timaaddaa qof kasta oo diyaar u ah inuu ku deeqo in lagu daro astaamo kasta ama cilad la saxayo.
Haddii dhibaato ka timaaddo barnaamijka furan ee furan waxay ku siin karaan qaddarin abaalmarin ay doorteen kan wax hagaajinaya.
Haddii aad tahay barnaamij-yaqaan waad baari kartaa codsiyada furan oo waad xallin kartaa dhibaatada, tan waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ku soo gudbiso codsi jiiditaan ah bakhaarka GitHub haddii codsi jiidistaada la isku daro waxaad heli doontaa lacagta.
Boostnote waxay leedahay $ 2,800 wadarta abaalmarinnada, halka Nidaamyada Iskuxidhka, ee hore loogu yaqaanay Visual Studio Code Settings Sync, ay bixiso in kabadan $ 1,600 oo abaalmarin ah.
Waxaa jira adeegyo kale kaas oo bixiya wax la mid ah waxa IssueHunt qlaga yaabee waxa ugu caansan waa Bountysource , kaas oo bixiya adeeg abaalmarin oo la mid ah IssueHunt, iyada oo sidoo kale bixisa habka lacag bixinta rukunka ee la midka ah Librepay.
Tani waa soo jeedin heer sare ah oo loogu talagalay horumariyeyaasha iyo barnaamijyada labadaba kuwaas oo raadinaya hab ay ku helaan xoogaa dakhli dheeraad ah.
Sidoo kale, markaan si kale u fiiriyo, waxaa jira dad badan oo sida caadiga ah abuura codsiyadooda mudnaanta fudud ee wax lala wadaagayo kuwa kale waxaanan helay sannado badan codsiyo aad u wanaagsan oo rajo leh oo si fudud u joojiya sii wadida horumarka xaqiiqda jirta awgeed in horumariyaha uusan haysan waqti maxaa yeelay wuxuu diirada saaraa noloshiisa iyo shaqadiisa.
Tan waxaad kaga tagi kartaa gacanta dadka kale ee leh dabeecada iyo waqtiga kaa caawin kara joogtaynta dalabkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » IssueHunt: waa madal cusub oo loogu talagalay maalgelinta isha furan